झरना र सुनिललाई जोडी पाउनै धौ धौ ! « Ramailo छ
झरना र सुनिललाई जोडी पाउनै धौ धौ !
फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ मा नयाँ जोडी भित्रिने भएको छ । ‘ए मेरो हजुर २’ को जोडी साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह र सलिनमान बनियाँको विकल्पमा निर्देशक झरना थापा र निर्माता सुनिल कुमार थाया नयाँ अनुहारतिर लागेका हुन् ।
उसो त ‘ए मेरो हजुर ३’ मा प्रदीप खड्का र अनमोल केसीको पनि चर्चा नभएको होइन । ‘ए मेरो हजुर २’ रिलिज भए लगत्तै झरना र सुनिल ५० लाखको प्रस्ताव लिएर अनमोल कहाँ पुगेको चर्चा बाहिरिएको थियो । तर यो चर्चा सत्य नरहेको झरनाले बताएकी थिइन् । यस्तै निर्माता सुनिल कुमार थापा ‘ए मेरो हजुर ३’ को लागि प्रदीप कहाँ पुगेको खबर छ ।
अन्य फिल्ममा व्यस्त भएका कारण अनमोल र प्रदीप ‘ए मेरो हजुर ३’ मा रहने सम्भावना निकै न्युन देखिन्छ । अनमोल र प्रदीपलाई ‘ए मेरो हजुर २’ मा पनि फिल्म खेल्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रदीप र अनमोल नभएपछि ‘ए मेरो हजुर २’ मा सलिनमान भित्रिएका थिए ।
नायिकाको रुपमा भने ‘ए मेरो हजुर ३’ मा थापा दम्पत्तीकी आफ्नै छोरी सुहानाको नाम चर्चामा आएको थियो । तर पढाइ चल्दै गरेकाले सुहानाले तत्काल फिल्म नखेल्ने झरना र सुनिलले बताएका छन् । सुपरहिट ‘ए मेरो हजुर’ को तेश्रो सिरिजमा कसको ईन्ट्री होला त ?